Nkọwapụta nkeonwe na Social Media bụ Azụmaahịa Na-adịghị Eme Ihe n'Eziokwu | Martech Zone
Nkọwapụta nkeonwe na Social Media bụ Azụmaahịa Na-adịghị Eme Ihe n'Eziokwu
Satọde, Satọdee 17, 2016 Satọde, Satọdee 17, 2016 Douglas Karr
Echefu nri na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị mgbasa ozi; Echere m na ụfọdụ n'ime ahịa aghụghọ kachasị dị na ntanetị bụ ndị ọkachamara n'ahịa na-aga n'ihu na-akatọ ụdị na ikwusa nghọta na ntanetị.
Ha bụ ihe ọ bụla mana nghọta.
M na ihe na-akpali oge ná ndụ m. Azụmaahịa m na-eme nke ọma, ndụ m dị mma, ahụike m na-akawanye mma kwa ọnwa. Nke ahụ kwuru, azụmahịa anyị na ndụ onwe m ka nwere nnukwu nsogbu. M egwuregwu na, ugbu a na m malitere a ole na ole ulo oru m na enweghị ọrụ, Agaghị m alaghachi n'ọrụ oge niile. Maka nke ahụ, ekwesighi m ịju anya ma debe akara ngosi zuru oke na ntanetị.
N’ọnwa gara aga, eso m mmadụ ole na ole nwee mkparịta ụka ebe ha mere ka mkparịta ụka m pụta ìhè na ntanetị. Na Facebook, m na-ekwurịta ma na-arụrịta ụka banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okpukpe na ụjọ nke ọtụtụ. Enweela m mmadụ ole na ole nọ na ụlọ ọrụ na-emezighị m maka ihe m kwuru ma ọ bụ isiokwu m kesara. Ndị na-ekwenyeghị m na-agwa m na m na-emebi azụmahịa m site na-ekwu banyere egbe, Chineke, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ndị mmadụ na-eme kwenye soro m nwayo ma duputa m ma kelee m maka ntinye a.… obu ezie na ha anaghi anwa anwa acho ma obu kwuo okwu banyere akuko m na-ekerita.
M na-akọrọ ma ndị mmadụ na m zụlitere dị iche. Etoro m na Roman Katọlik, ma ọkara ezinụlọ anyị bụ ndị Juu. Nna m bụ nwoke anaghị eche nche, Onye Ọchịchị, na onye ịhụ mba n'anya… mana mama m bụ onye French-Canadian nke nwere ezinụlọ na -emesapụ aka nke Europe. A gbara m ume ikwu okwu na ịrụ ụka. Ndị ezinụlọ m nyekwara nkwanye ùgwù maka echiche ndị ọzọ.
Emi ekedi edidiọn̄ m̀m or isụn̄i. Mgbe m na-etolite, atụghị m ụjọ ịsọpụrụ mmadụ. O mere ka m nwee nnukwu nsogbu na ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Mgbe m gụsịrị akwụkwọ, ịbanye n'thetù Ndị Agha Mmiri kụziiri m ịdọ aka ná ntị na ịkwanyere mmadụ ùgwù. Mgbe m sonyeere ndị na-arụrụ ọrụ ọrụ, ndị isi gwara m ka m nwee ike ime ihe masịrị gị na ibu ọrụ dịịrị m. Tinye ihe a niile, ọ na-eme ka ọkụ na-ere ọkụ. Nke ahụ sụgharịrị ịbụ na ọnụnọ m n'ịntanetị.
Ezuru m. N'ụzọ na-emegide onwe ya, nke ahụ bụ obere anụ ụlọ nke ọtụtụ ndị isi ụlọ ọrụ na ntanetị. Udeme ha na-enweghị ngwụcha nke ndụ ha zuru okè na-agwụ m ike.
Ikekwe ọ bụ ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nkewa anyị na-agbakwunye na emeghị ihe n'eziokwu na ntanetị, mana echere m na ọ jọgburu onwe ya. Ọ bụghị naanị na ọ bụ naanị ehi nkịtị, kamakwa m ga-ekwu na ọ bụ mmejọ na ọbụnadị dị egwu. Ikekwe okpukpe gị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ nke onwe gị, ọ bụghịkwa ihe ị chọrọ ikwusa; Enwere m ike ịkwanyere ya ùgwù. Ma ihe m enweghị ike ịkwanyere ùgwù bụ iyi na-enweghị njedebe nke ndụ gị zuru oke yana etu azụmahịa gị si arụ ọrụ dị egwu.
You nwere ike iche n’ịbụ onye na-arụ ọrụ na nkwalite nke onwe gị yana nke ọkachamara gị, yana ihe ị na-ahụ n’ịntanetị bụ ndị folks ị na-ele anya na ntanetị na-anaghị agba mgba? Ọ dị m ka ọ ga-agwụ ike. Ekwenyere m na m onwe m na ọkachamara na-enwe ihe ịga nke ọma karịa ọtụtụ n'ime ndị a - mana ị gaghị amata nke ahụ site n'ịtụle profaịlụ anyị n'ịntanetị. Ikekwe ọ bụ n'ihi na m na-atụle ihe ịga nke ọma m site na mmadụ ole m na-enyere aka, ọ bụghị n'ụsọ osimiri m nọ ọdụ.
Ma n'ihi ụfọdụ iju ihe mere, m ime ihe n'eziokwu online n'ụzọ ụfọdụ hụrụ dị ka a mebiri na m onwe branding ọtụtụ na m ụlọ ọrụ. Verylọ ọrụ na –agba okwu dika nghọta na eme ihe n'eziokwu. Ha bụ ihe ọ bụla.
Kemgbe ọtụtụ afọ, agbachaala m ọtụtụ narị mmadụ na ụlọ ọrụ m, enwerekwa ole na ole m họọrọ ka m na-eso. Ha na-ekere òkè nke onwe ha, mgbe ụfọdụ ha na-ahụ maka ahụ ike ọgụgụ isi. Ha na-enwe nsogbu ahụ ike ha na ngbanwe ha. Ha na-ekerita nsogbu ha. M na-agba ha ume, ha na-akpali m ịbụ ezigbo mmadụ, ezigbo onye ndu, nna ka mma na ezigbo azụmaahịa.
Etu ị ga-esi mee ihe n'eziokwu na ntanetị
O juru m anya na m na-ede okwu ndị ahụ, mana m kwenyere na ha dị mkpa. Nke a bụ ihe m ga-achọ ịhụ ka ndị isi ahịa na-eme na ọnụnọ ha n'ịntanetị:
Kwenye adịghị ike ha na nsogbu ha. Anyị niile nwere ha, ọ na-enye obi ụtọ mgbe onye ị na-ele anya ịkekọrịta nke ha.
Jụọ maka enyemaka. Onye ọ bụla chọrọ enyemaka, kwụsị ịnwa ime ka à ga-asị na i nwere azịza nile.
Share Chakwasa ihie ọzọ. Na ndị na-ege ntị ma rute ndị a nwere mmetụta, kedụ ka o si bụrụ ihe ịtụnanya mgbe ha nabatara ndị na-agba mbọ ịdọta uche na ntanetị?
akpali ndị ọzọ na ha nwere ike mezuo ihe ị rụzuru. Anyị niile emeriela nsogbu iji banye ebe anyị nọ, na -ekere otu ị siri ruo ebe ị nọ ka anyị mara na ha nwekwara ike ime ya.
Social media na-enye ohere a dị ịtụnanya iji wulite njikọ mmadụ na ntanetị. Ọ dịghị ihe ọzọ dị mmadụ karịa ịdị umeala n’obi, ọdịda, mgbapụta na adịghị ike, enwere ya? Enwere m ike ọ gaghị enwe ọtụtụ ndị na-eso ụzọ dịka ndị ọzọ nọ na ụlọ ọrụ m nwere, mana enwere m ike ịkwado gị na mụ na ndị na-eso m nwere mmekọrịta miri emi karị.
O doro anya, enwere m ike ịmepụta mmadụ adịgboroja, naanị ịkekọrịta azụmaahịa azụmaahịa anyị, ma dọta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ. Mana ọ ga - akara m mma inwe ezigbo mmekọrịta m mepụtara kemgbe ọtụtụ afọ karịa ịgha ụgha ụgha.
Tags: njirimara nke onweSocial Media Marketing
Pimex: Jikwaa ma tinye ego na ahia gị
Sep 18, 2016 na 9: 10 AM
Abụghị m onye nwe azụmaahịa, ọtụtụ ihe ị na-ekwu anaghị emetụta m kpọmkwem. Na, Anọghị m na mgbasa ozi mgbasa ozi. (M na-ede edemede akwụkwọ azụmahịa maka ndị enyi na ezinụlọ, yabụ otu m siri hụ saịtị gị ka m na-eme nyocha.) Agbanyeghị, enwere m obi ụtọ maka edemede gị - echeghị m na ahụla m ihe ọ bụla n'eziokwu tupu. Ọ dị mma ịhụ onye nwe azụmaahịa na-aga nke ọma na-edebe ya n'ezie, ya mere daalụ.
Sep 19, 2016 na 3:33 PM
Daalụ nke ukwuu, Rita!
Sep 19, 2016 na 6:47 PM
Abụ m mmụọ nke nwere ahụmịhe mmadụ… mmmm. Enwere m obi ekele maka ndị mmadụ ibi ndụ ha 'n'ụzọ zuru ezu ma hụ na ha na-enyere ndị ọzọ aka ka anyị na-eto ..
Edemede mara mma ..na ị bụ onye ihu abụọ… ka m swearụrụ iyi a. Igbe gbapụta dị nso kpọbatara m ebe ahụ sekọnd ole na ole gara aga… enwere ike inwe mkparịta ụka…
Sep 19, 2016 na 9:48 PM
Anaghị m ama ihe igbe mmapụta nwere metụtara m ime ihe n'eziokwu na mgbasa ozi mmekọrịta. Biko mee ka m mara.